Tag: angona finday | Martech Zone
Tag: angona finday
Fomba 5 amin'ny tombontsoa amin'ny varotra amin'ny fanaraha-maso Hyperlocal
Zoma, Septambra 19, 2014 Zoma, Septambra 19, 2014 Nathan Chandra
Ireo orinasa mpivarotra antsinjarany dia mifaninana amin'ireo goavambe antserasera toa an'i Amazon sy Zappos. Ny fivarotana fivarotana biriky sy rihitra dia mikendry ny hanome traikefa tsara indrindra ho an'ny mpanjifany. Ny fivezivezena amin'ny tongotra dia refy fanentanana sy fahalianan'ny mpanjifa (maninona no aleon'ilay olona manatona ny fivarotana hividy raha misy ny safidin'ny fividianana amin'ny Internet). Ny tombony azo amin'ny fifaninanana ananan'ny mpivarotra amin'ny fivarotana an-tserasera dia ny eo akaiky eo ny mpanjifa ary vonona ny hanao
Sarin'ny mpanjifa finday
Asabotsy, Jona 7, 2014 Zoma, Jona 6, 2014 Douglas Karr
Manova ny zava-drehetra ny teknolojia finday. Afaka miantsena, mahazo tari-dalana, mizaha tranonkala, mifandray amin'ny namana amin'ny alàlan'ny endrika haino aman-jery isan-karazany ny mpanjifa, ary mandrakitra an-tsoratra ny fiainany amin'ny fitaovana tokana ampy hidirana ao am-paosiny. Amin'ny taona 2018 dia tombanana ho 8.2 miliara fitaovana finday miasa no ampiasaina. Tamin'io taona io ihany, ny varotra finday dia antenaina ho ambony $ 600 miliara amin'ny varotra isan-taona. Mazava fa ny tontolon'ny asa dia novolavolain'ity farany ity